Downloads 18 374
Munyori: SkySpirit2011, Alrot, rakapepetwa Chris Evans & Enrique Cornejo
Rongedzai Boeing 747-8I Air China pamwe akavandudzika VC. China pamutemo akava muna 2014 wokutanga nyika upfumi simba mberi United States, zvakanga zvakajairika kuti Rikoooo kuti dzitsaurire rongedza, vakaungana uye rakapepetwa Chris Evans.
Air China ndiyo chete National kambani pamusoro Civil Aviation of China, inhengo Star Alliance, chikuru yendege mubatanidzwa munyika.
Vakaungana upgraded nokuda FSX pamwe dzakabudirira B747 VC (rakapotsa 3d Cockpit) kubva Alejandro Rojas Lucenda. Ndiro Project Opensky FSX chizvarwa Boeing 747-8i GenX womuenzaniso, uye zvinosanganisira pasi zvinhu SERVICING, masitepisi (FSX - Enda Views - Instrument Panel -Posky utility), kuvhura mhino chikamu uye zvakawanda. Included CF injini rinonzwika kubva BrandonG, pamwe sezvazviri ndege zhamba kuti kutiza kwenyu kuridza kwazvo. Upgraded kushandisa mano hwakavandudzika Boeing 747 VC kubva Alejandro Rojas Lucena / FSND (Ona emadziro docs kuti mashoko). VC inosanganisira FMC, EICAS, MFD pamwe control panel, GPWS, kushanda wipers, kabhini zviedza, moto kudzvinyirira, avionics chinja, mafuta crossfeed, kumhara zviedza haizoshandisi, taxi chiedza chinja, injini emagetsi, apu jenareta, bhatiri chinja, Starter haizoshandisi, va- chando chinja, mukuru zviedza haizoshandisi. Mazvita kuti chirongwa Opensky kwavo kunoshamisa mari pose nenzanga kutiza simulation. Handina zvaisanganisira mukuru Air China textures kubudikidza Stian Svensen. Uyewo zvinosanganisira Boeing 747 VC textures ndiwedzere. Izvi kupa yakajeka 747 mukati rakapotsa Cockpit kutarisira.
Downloads: 69 170
Downloads: 95 198
Downloads: 13 740
Downloads: 76 386